Warbixin muruga leh oo la xariirta Covid 19 | STN Somali
Home Wararka Warbixin muruga leh oo la xariirta Covid 19
Warbixin muruga leh oo la xariirta Covid 19
Muqdisho (STN) – WARBIXIN – Tusaale murugo leh oo qeexaya mahadhada Koroona ee Soomaaliya.
Agaasimaha guud ee Isbaatlka Martiini, Dr C/risaaq Dr. Yusuf ayaa ka hadlay dhacdooyonkii xanuunka badnaa ee uu la kulmay intuu socday halkgankii ay kula jireen Covid 19 iyo sidoo kale marxaladihii adkaa ee ay ku shaqeynayeen.
C/risaaq oo ka mid ahaa dadkii ka bogsaday xanuunka Koroona, isla Xanuunkaasina uu sababay Geeridii Aabihiis, -allaha u nacariistee – ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook ku faahfaahiyay dareenkii uu ku beeray Koroona Feyras …
Hoos ka akhriso qoraalka mudanaha.
Way igu adkeed wayadaan oo dhan inaan qoraal kaga sheekeeyo Howlaha iyo Halganka adag Ee COVID19 waxaan gabay mudaba inaan haleelo erayada iyo qaab qoraalka aan rabo inaan kaga sheekeeyo waayahayga COVID19 ama corono virus.
Halkeen ka bilaaba maa xaaladaan ku shaqeeynaynau mise dhibkee ina gaaray mise kala irdhoowgii inagu nacay , ma waxaan ka bilaaba abaabulkeenii shaqada iyo carcartii gobanimada mise gurmadkii badnaa iyo isku tashigii , ma waxaan qoraa siduu xanuunkaan COVID19 ii saameeyay qoys ahaan iyo qof ahaan , ma waxaan qoraa xanuunkaygii qandhadii darneed iyo Bukashadii aan la qarway ,
Maya waa inaan qoraa Geeridii abid ugu xanuunka badnayd ee uu Xanuunka COVID19 ii sababay Geeridii Aabahay iyo Sariirta ICU ee Numberka 4 wadatay iyo subaxaas Jimcaha ee dunida dhan hal mar madowga noqotay ! Waa inaan faalo ka qoraa taas dareenkeedana aan joogteeya oo qormooyin is xiga ka qoraa sidaas bay mar walba naftu i tiraahdaa.
Mise waxaan kaa faloodaa oo qoraal ku kala dhigdhigaa isku xirkii , shirarkii iyo shaqadii joogtada ahayd u guntashadii ilaa la magac baxday Baacsiga koroono , miyaan ka faaloodaa siday cid waliba isugu habar wacatay iyo sidaan habeen iyo maalin isku mid u ahayd oo xilli walba la soo jeeday la dhididay lana ooyay iyadoo la shaqaynayo.
Maya ee waa inaan ka faaloodo murugadii iyo dhaxdintii lala kulmaayay markuu qof geeriyoodo markii mayd isbitaal martiini la keeno iyo marka aad kor istaagto gacal aadan waxa u qaban karin oo ay nafta ka baxayso.
Waa inaan ka faaloodo oo aan wax ka qoro farxadii marka ruux coma galay inoo kaco marka bukaan bogsoodo oo lugihiisa ku istaago marka Nurse 36 saacadood taagneed ay hal mar qosol la gariirti marka ay soo hagaagto xaalad ay la raafadsaneed oo juhdigeeda ilaahay garab galo oo bukaankaas u badbaado.
Waa inaan sheekooyin ka qoraa faaladii dadwaynahay magacyadii kala duwanaa ee naloo bixiyay dhaliilihii iyo mar marka qaar aflagaadadii aan la kulanay iyo wixii dharbaaxo ahaa ee inagu dhacay iyo waliba siday u kala xanuun iyo tiiraanyo badnaayeen miyaan hilmaami karnaa waa in buug laga qoro oo waliba laga dhigo faalooyin jaaridada qoraan.
Waxaanse maanta qorayaa kaliya inaan asxaabta hoos sawirkooda ka muuqdo qiro inay yihiin intaas oo qormo kuwii inala qoray inala qotomiyay martiini oo ku dhawaad 1000 qofood oo bukaan ah Naftooda u huray oo badbaadiyay kaalmada ilaahay kadib.
Waxaanse maanta qorayaa inay Calan yihiin wiilshaas iyo gabdhahaas inay Halgamayaal hiil badan yihiin in Hogaamiyayal naf huro yihiin inaan isku qoys iyo tol nahay ciil iyo murugo iyo ooyin badan wada qaybsanay inaan maanta ka wada baxayno murug iyo wadno garaac badan inaan wada qorshaynayno mustaqbal ifiya oo caafimaadka dalka ah inaan tababar adag oo xaga nolosha wada qaadanay iyo inaan waliba guulaysanay inagoo nool oo damiir ahaan waliba nool !
Idin ogsooni dhamaan ilaahayn waa idin ogyahay oo waxaan ka dhalinay dhibta iyo dhacdada COVID19 miro dadnimo iyo Ubax udgoon oo halgan iyo hiigsi leh , waxaan abuurnay rajo nololeed waxaana beernay wanaag dabaqyo dhadheer iyo buuro ah.
Inkastoo corono virus iyo Xanuunka COVID19 ahaayeen Argagax xanuun badan yeesheen saameen mug leh oo dhan walba oo Nolosha ah hadana inaga waxaan nasiibsanay inaan kala harayno xasuus walaalnimo wada jir iyo midnimo iyo dad xul ah oo garab isu ah waligood.
Waa qoyskayga aan aaga uga wada jirnay labadii bilood ee la soo dhaafay Isbitaalka De Martino .
Previous articleShirkii Khamiislaha ahaa e Golaha Wasiirada XFS oo Maanta Baaqday Xilli la wada Sugayey
Next articleMarkii uu qofka yimaado wadamada Reer Galbeedkaadka sadax mid unbuu noqdaa